जीवनशैली - यथार्थ खबर
मानिस मानिस लगभग 80 % पानीले बनेको हुन्छ । हाम्रो शरीरमा भएका हरेक अंग, सेल र टिस्युले यसलाई राम्रोसँग काम गर्न प्रयोग गर्दछ, जसले गर्दा प्रत्येक दिन पर्याप्त पानी पिउनु महत्वपूर्ण हुन्छ । पर्याप्त पानी नपिउँदा के हुन्छ जे गरे पनि&nbsp; आठ गिलास पानी पिउनुपर्भछ नेर ढुक्क हुनुहोस्, नत्र डिहाइड्रेसनले पुरै समस्या निम्त्याउन सक्छ । यहाँ केही साइड इफेक्टहरू छन्: टाउको दुखाइको अवस्था :&nbsp...
यदि तपाईं घर, करियर, बच्चाको योजना गर्नुहुन्छ भने सेक्सको योजना किन बनाउनुहुन्न ? एकै छत मुनी सँगै बस्दा यति तपाईं सेक्सलेस म्यारिजमा बस्नुहुन्छ भने यो खतराको घन्टी हो । यदि एकजनाको यौनइच्छा बाहिर पूरा भइरहेको छ भने अर्को पार्टनर सेक्सलेज म्यारिज झेल्छन् । यदि तपाईं पछिल्लो दुई वर्षदेखि यौनबिनाको वैवाहिक सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले साधारण यौनजीवनका लागि असाध्यै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्...
उभिएको बेलामा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । अझ कोही त उभिएर सासै रोकेर पानी पिउँछन् । यो कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।&nbsp; स्वास्थ्यविज्ञहरूका अनुसार बसेर सानो-सानो चुस्की लिँदै पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ।&nbsp; तपाईंले उभिएर पानी पिउँदा यो सिधै पेटमा ओइरिन्छ र आन्द्राको भित्तामा ठोक्किन पुग्छ । यसरी ठोक्किँदा पेटको भित्ता, वरिपरिका अंग र पाचननलीमा हानि पुग्न सक्छ । लामो समयसम्म यसो गर्...
&lsquo;ओहो! तिम्रो अगाडिको भागमा कपाल नै छैन त!&rsquo; टाउको त तक्लु हुँदै गएछ।&rsquo; भेट्ने बित्तिकै साथीहरूले हालखबर समेत नसोधी टाउकोमै नजर लगाउँदा कपाल झरेर तालु खाली भएका व्यक्तिको अनुहार पक्कै खुम्चिन्छन्। यस्तै समस्याबाट आजभोलि धेरै युवा पीडित छन्।&nbsp; &lsquo;तिम्रो कपाल कति पालतो हुँदै गएछ। पहिला त राम्रो थियो।&rsquo; कपालकै विषयलाई फोकस गरेर साथीहरूले कुराकानी सुरु गर्दा युवतीहरूको म...
नेपालको मैलिक र रैथाने खाना कथुरे तथा लोकल कुखुराको झोल प्रायः सबै भेगमा लोकप्रिय छ। पहाडी भेगमा परापूर्वकालदेखि खाइने कथुरे र लोकल कुखुराको भालेको झोल अहिले राजमार्गका होटल र रिसोर्टमा निकै महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।&nbsp; यो परिकार स्वादिष्ट र स्वास्थ्यवर्द्धक हुने हुँदा धेरैको रोजाइमा परेको छ। विदेशीहरुले पनि कथुरे र लोकल कुखुराको झोल खूब मन पराउँछन्। कथुरे बनाउन चाहिने सामाग्री :&nbsp...
&nbsp;निषेधाज्ञामा नोक्सान बेहोरेका पोल्ट्री व्यवसायीले राहत महसुस गर्न थालेका छन् । कुखुराजन्य क्षेत्रका सबै उत्पादनको मूल्य लागतभन्दा बढी भएको छ । &nbsp;अण्डाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ भने चल्ला र मासुको मूल्य लागतभन्दा बढेको छ । गएकाे वैशाखको पहिलो हप्ताबाट ओरालो लागेको पोल्ट्री व्यवसायको कारोबार क्रमशः बढ्न थालेको हो । यही साउन महिनामा अण्डा, मासुको खपत कम हुने भनिए पनि माग बढेपछि मूल...